Dagaal aad u qaraar oo ka dhacey deegaano ka tirsan gobolka baay. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka Dagaal aad u qaraar oo ka dhacey deegaano ka tirsan gobolka baay.
Dagaal aad u qaraar oo ka dhacey deegaano ka tirsan gobolka baay.
Dagaal ba’an oo aad u qaraar ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu ka dhacey deegaano ka tirsan gobolka baay dagaalkaas oo u dhaxeeyey ciidamada Amisom iyo kuwa dawlada oo isku dhinac ah iyo dagaal yahanada xarakada Alshabaab.
Dagaalka ayaa labada dhinac kawada sheegteen guulo wax ku ool ah,lamana oga khasaaraha kala gaarey dhinacyada dagaalamey,mid kamid ah dadka deegaanka lagu dagaalamey ayaa sheegey in dagaalku ahaa mid aad u culus oo loo adeegsadey hubka nuucyadiisa kala duwan.
Maahan markii ugu horeysey ee ay is farasaaraan ciidamada amisom oo ay wehliyaan kuwa dawlada federalka iyo dagaalyahanada xarakada Alshabaab hase yeeshee dagaalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo xildhibaanada kasoo jeeda gobolka baay ay olo ole ugu jiraan sidii ay maamulgoboleed ay leeyihiin gobolo lix ah oo ay ku jiraan sh/hoose iyo jubooyinka uu hugaamiyo Sheekh Axmed Madoobe.
Previous articleWarsaxaafadeed kasoo baxey xafiiska r/wasaaraha soomaaliya Dr Saacid.
Next articleGudiga adeegga garsoorka oo ku dhaleeceeyey xukuumada in ay ka gaabisey difaaca garsoorayaasha.